रोटी चिसो हुनबाट यसरी बचाउनुस् - ज्ञानविज्ञान
गहुँको सुक्खा रोटीको सौखिन धेरै हुन्छन् । अधिकांश नेपालीको भान्सामा यस्तो रोटी तयार हुन्छ । उसो त डाइबिटिजजस्ता रोगका लागि पनि रोटी निकै उपयुक्त हुन्छ । तर, यस्तो रोटी चाँडै सेलाउने र दह्रो हुने भएकाले धेरैलाई चिन्तित बनाएको हुन्छ । यस्तो चिन्ताबाट मुक्त हुन सानो आइडिया पनि पर्याप्त बन्न सक्छ :
लामो समयसम्म रोटी नरम बनाइराख्न पिठो मुछ्ने र बनाउने तरिकाले निर्भर गर्छ । पिठोमा आवश्यकताअनुसार तातो पानी, एक–एक चम्चा नुन र तेल राख्नुहोस् र आधा घन्टा छाडिदिनुहोस् । अब, राम्रोसँग २० मिनेटजति मोल्नुहोस् । वेला–वेलामा पानी थप्नुहोस् । पिठो मुलायम भएपछि बेलेर रोटी बनाउनुहोस् ।
तयारी रोटीलाई नरम र तातो बनाइराख्न घरमा कुलिङ ¥याकको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । कुलिङ ¥याक छैन भने घरकै भाँडो पनि प्रयोग सक्नुहुन्छ । पकाएको रोटी यस्तै भाँडोमा राख्नुस् ।
त्यसपछि क्यासरोलमा कटन बिछ्याउनुहोस् र त्यहीमाथि रोटी मिलाएर राख्नुहोस् । रोटी राखिसकेपछि कटन कपडाले छोपिदिनुहोस् र क्यासरोलको ढक्कन लगाइदिनुहोस् । यसरी राख्दा रोटी कम्तीमा दुई घन्टासम्म तातै रहन्छ ।
रोटी चाँडै चिसो र कडा हुनुको कारण रोटीबाट बाफ उड्नु हो । रोटीबाट निस्किएको बाफ भित्रै रह“दा त्यही बाफले केही बेर रोटी तातै रहन मद्दत पुग्छ । क्यासरोलमा रहेको पातलो कटनले बाफ सोस्छ र रोटीलाई तातो पनि राखिराख्छ  ।
यो पोस्ट हामीले नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरेका हौ  ।
अरु यस्तै जानकारी को लागि कृपया ज्ञानविज्ञान लाइक तथा सेयर गर्नुहोला
Don't Miss it मानसिक तनाब र यसका रोकथामहरु
Up Next चार्मिङ बढाउन पुरुषका लागि ७ टिप्स
नङले हात र खुट्टाको सुन्दरता बढाउनुका साथै सुरक्षा पनि दिने गर्छ । हात र खुट्टा जतिसुकै सुन्दर भए पनि नङ…
हामीले कस्ताे बेलामा अनार खान हुदैन ? जान्नुहाेस्
अनारले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गर्ने गर्छ । अनार बिरामीलाई समेत खुवाइने गरिन्छ । अनारको नियमित सेवनले हाम्रो शरीरमा शरीरमा…
मुख तथा सास गनाउने समस्या र यसको समाधान
छ्या तिम्रो मुख कस्तो गन्हाएको अलि पर बस।’ यस्तो प्रतिक्रिया कुनै साथीबाट सुनियो भने जोकोहीलाई नराम्रो लाग्नसक्छ। बाहिर हेर्दा स्वस्थ…
तपाइको कपाल कतिको स्वस्थ्य छ, यसरी थाहापाउनुस
कपालको समस्या सबैलाई हुन्छ । यो समस्या एउटा जटिल समस्या नै हो । कपालमा किन धेरै समस्या देखिन्छन्, कपाल किन…
ब्रतमा साबूदाना शाकाहारी कि मांसहारी? एक चोटी पढ्नै पर्ने
महिलाहरुको लागि ब्रत भन्ने कुरा धेरै मान्यता मुलक हुन्छ। ब्रत बह्नेको एउटा आस्था र विश्वास हो । महिलाहरु ब्रतमा धेरै…
गर्मी बढेसँगै शरीरमा पानीको कमी हुने समस्या देखापर्छ । जस कारण विभिन्न रोग लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । गर्मीमा…
दिमागलाई शान्त तथा सन्तुलित राख्नका लागि केही उपायहरु कामयावी हुनसक्छन्, जुन यस्ता छन्
अप्रिय कुरामा नअल्झिनुस् पूरै किताबको कहानी त्यसको एक अध्यायले बताउन सक्दैन । त्यसैले कुनै एउटा गल्तीले नै तपाइँको पूरै प्रतिष्ठा…